Saint Jude Thaddeus «Ekpere» † 【Patron of Desperate Causes perate
San Judas Tadeo: ndụ na ọrụ ebube nke "onye nkwado nke ihe siri ike na enweghị olileanya"
Obi abụọ adịghị ya mara otu esi ajụ ihe n'aka San Judas Tadeo Ọ dị mkpa iburu ụzọ mata ihe ụfọdụ banyere ndụ onye ahụ ghọrọ otu n’ime ndịozi a hụrụ n’anya karịa na Bible.
Ọ bụghị n'efu, ekpere nke ekpere ya ka ọ hụ n'anya, ikpe na-enweghị isi ma rụọ ọrụ, na-eje ozi dị ka nkasi obi nye ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi. Nwoke ugwu di ya nma, onye nwere obi ebere, onye a wukwasiri osimiri.
Ọ bụghị naanị San Judas Tadeo ka a na-ajụ n'ọnọdụ ọjọọ, enwere ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata ihe kpatara ọnụ ọgụgụ ndị ụka a ji ekpe ekpere, ịnwere ike ịmatakwu ihe.
1 Onye bụ San Judas Tadeo
2 Kedu ka ọrụ nke "El Trinomio"
3 Ọrụ ebube dị a theaa ka nchebe nke ihe na-agaghị ekwe omume na-akpata
4 Otu esi ekpe ekpere Saint Judies
4.1 Ekpere nye Saint Jude Thaddeus maka ikpe ndị siri ike ma na-enweghị isi (ekpere Katọlik)
4.2 Vidiyo na ekpere nye Saint Jude Thaddeus maka ọrụ ebube agaghị ekwe omume:
Onye bụ San Judas Tadeo
Ọtụtụ ndị bụ ndị na-ekpegara ya ekpere, mana ole na ole maara n'ezie onye Judas Tadeo bụ. O nwere ike iju gị anya na onye anyị na ya na-arụ bụ otu n’ime ndị na-eso ụzọ Jizọs onye Nazaret n'Oziọma a kpọrọ ya nwanne Jizọs, naanị Tadeo ma ọ bụ Judas de Santiago. Nke a mụrụ na mpaghara ókèala n'etiti Eshia na Europe. Otu ọnọdụ nke San Chárbel, nke ị nwere ike ịmara ihe niile https://descubrir.online/, San Cipriano, nke ị nwere ike GỤKWUOma Saint Pancratius.
Dị ka a ga - asị na aha ndị a niile dị ole na ole, San Jerónimo de Estridón kpọrọ ya "El Trinomio", ya bụ, "nwere aha atọ". Cheta na aha Judas pụtara "otuto nye Chineke" na akpọkwara ya aha "San Juditas Tadeo".
Onye nsọ a nwere ihe jikọrọ ya na Jizọs Kraịst n'ihi mmekọrịta ya na San Joaquín na Santa Ana, nne na nna nke Virgin Mary. Aha nna ya bụ Cleopas na nne ya Meri, aha nne na nna nke nne Jizọs. N'ihi ya, ọ bụ nwa nwanne José na María na, ya mere, Nwa nwanne nna Jizọs Kraịst. Otu n’ime ụmụnne ya bụ Santiago nke Nta.
Onye enyi Jizọs n'oge ntorobịa ya na ntorobịa ya, mgbe onye nke ikpeazụ malitere ndụ ọhaneze, Thaddeus, onye a malitere ịkpọ aha ahụ iji mee ka ọ dị iche na Judas Iskarịọt, hapuru ihe nile soro ya.
Dị ka ịmata ihe, anyị chọrọ ịkọwa na ozugbo Jizọs Kraịst, mgbe nri abalị ikpeazụ gasịrị, kwere nkwa na ya ga-egosipụta onwe ya nye ndị ga-ege ya ntị, Judas nke Santiago jụrụ ya ihe kpatara na ọ naghị egosi onwe ya nye onye ọ bụla, dị ka ihe ịrịba ama nke nnukwu uche nke e ji mara onye nsọ a. . Kraịst zara na Nna Ya na Ya ga-eleta ndị niile hụrụ Ya n’anya. "Anyị ga-abịakwute ya ka anyị biri n'ime ya." (Jọn, 14, 22-23).
Kedu ka ọrụ nke "El Trinomio"
Onye nwere ndidi na onye echebere banyere ihe banyere okike, onye gaara amụ na Kena nke Galili, ọ hapụrụ ọrụ ya sonye n'òtù ndị na-eso ụzọ Mezaịa ahụ, gh] ab gh only náán one otù nime Nd Apostozi nke Nna-ukwu ah kama] b kwa onye ukwu na onye nkwusa nke ventkvents of ike nke ozizi ya.
Mpaghara nke Galili, Judia, Egypt, Eshia, Yufretis, Taịgris, Sameria, Libya, Edessa na Babilọn bụ ụfọdụ n'ime ohere ọma nke Taddeus buuru ozi Mesaịa, nke gwụkwara na njedebe nke Peasia na Syria.
Mgbasa ozi a abụghị ihe a ga-akọwa dị ka udo, ebe ọ bụ na ọ na-agabiga ebe ndị ahụ anyị kwuru n’elu nwetara mkpagbu obi ọjọọ. Sin embargo, en ningún momento tales presiones consiguieron hacerle cejar en su empeño. Es más, sus prodigios se multiplicaron y, merced a sus virtudes, las personas se transformaban al Iso Christianityzọ Kraịst por cientos, entre ellos el Rey Abab de Babilonia.
N'ịbụ onye nwanne ya nwoke bụ Simón so, ọ gara n'okporo ụzọ ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ, bịarute Peasia, ebe e ji ajọ omume megide ụkpụrụ omume na nke Ndị Kraịst mara. Undeniable bụ ya merit nke tọghata narị puku ndị bi na mpaghara ọjọọ a, ikwusa na idozi ihe ọjọọ na mmejọ ha, ime ha baptizim, na-akwado ha ma na-alụrụ ha.
Omume ha mere ka ndị ahụ na-ekpere arụsị a na-eleda anya, na-enwe nkụda mmụọ n'ihi enwekwaghị ntụkwasị obi ha, ịkwalite ha na njem ha na-aga n'obodo ọzọ, bụ Suamir, bụ ebe ha jiri akụkọ ụgha mebie ntị ndị mmadụ banyere ọbịbịa na-esote ndị mba ọzọ abụọ a ga-ama ikpe ọnwụ, n’ihi na ha na-ekpochapụ ofufe nke chi.
Mgbe Ndị-ozi abụọ ahụ rutere, a nabatara ha na mkpu dị egwu, jidere ha ma mekpọọ ha ọnụ na-enweghị ebere, na-eduru ha gaa n'ụlọ nsọ ahụ maka ofufe nke Sun na Ọnwa. A hapụrụ n'ụlọ nsọ ahụ ma kee ya agbụ ruo ụtụtụ n'echi ya, mgbe a mara ha ikpe ọnwụ, a na-akọ na Simón gburu ya site na hama n'isi ma ọ bụ jiri aka na-agbaji ya abụọ.
O yiri ka, mgbe a na-emekpa ha ahụ, Thaddeus jisiri ike leba anya n’anya Saịmọn na-ekwu "Nwanne, ahuru m onyenwe anyi Jisos Kraist na akpo anyi", Nke a kpalitere ọgbụgba ọzọ nke aru nke Ndị-ozi.
Na usoro nke ka San Judas Tadeo si nwụọ, azịza ya bụ na e jiri anyụike gbupụ ya isi, ọ bụ ya mere ụfọdụ na-eji were otu n'ime ihe ndị a na-ese onyinyo ya mgbe ụfọdụ.
Ọrụ ebube dị a theaa ka nchebe nke ihe na-agaghị ekwe omume na-akpata
A makwa Thaddeus dị ka "onye nchebe nke ihe ndị na-enweghị ike ibute", n'ihi na Saint Brígida dị omimi dere na Jizọs tụrụ aro otu ụbọchị na mgbe ọ bụla ọ chọrọ inweta ihu ọma ụfọdụ, na ọ ga-arịọ ha site n'aka onye nsọ a na-ekwu okwu ya. N'ihi nke a, ya na Santa Rita de Casia na-ekerịta ụdị nkwado a.
A maara ya maka ọrụ ebube buru ya ụzọ, ruo n'ókè nke idebe ya na ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ndị nsọ na-ewu ewu, na-eme ememe n'ụbọchị San Judas Tadeo na October 28. Nraranye ya na ndụ na-akwado ya dị ka obi umeala na ịhụnanya n'ebe ndị niile rịọrọ ya ka o nye ọrụ ebube.
Jizọs kpọrọ ya aha ya "Onye Na-agwọ Ọrịa", N'ịghọta ọmịiko ya, omume ịhụnanya ya ma dị njikere mgbe niile iji dozie ihe ndị na-agaghị ekwe omume ma ọ bụ nke furu efu, kemgbe ahụ ekpeela ya ekpere wee nye ya onyinye.
Gị na-agwọ ọrụ ebube nke ndị na-arịa ọrịa ma ọ bụ ndị na-enweghị olile anya agaala ụwa. Ọ bụkwa onye protagonist na ihe ọghọm ndị ahụ a na-akọ na mmadụ efu.
Kpọmkwem, ekwenyela arịrịọ ya n'ọtụtụ ọrụ ebube dị iche iche nke mkpebi ya juru ndị ọrụ ahụike ahụ nọ na-atụgharị anya na ha, na-enweghị nkọwa sayensị maka uru ya.
N'otu aka ahụ, ịhụnanya bụ injin na udo maka ọtụtụ ndị bi na ebumnuche ịhụ ndị ọzọ n'anya. Saint Jude bụ onye ogbugbo nke n’ichebe uzo nke di n’etiti mmadu abuo na obuna ndi ozo. Nwere ike ịgakwuru ya iji weghachite ịhụnanya furu efu n'ime ezinụlọ, na di na nwunye ma ọ bụ n'ikpeazụ ị ga-ahụ onye ahụ chọrọ ma dị mma.
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ekwenyeghị na onye nsọ a dị mkpa na ihe gbasara ịhụnanya, enwere ọtụtụ ọrụ ebube ndị ọ rụrụ n'aha obi.
Otu esi ekpe ekpere Saint Judies
Uzo ziri ezi iji juo onye nso a maka ihe a choro bu site n’ekpere. Onye nwere ikpe tara akpụ ma nwekwaa nsogbu nyere gị aka ma duzie gị n'oge ihe isi ike gị ọ na-esite na mkpughe a kpọtụrụ aha na Santa Brígida.
Ekpere nye Saint Jude Thaddeus maka ikpe ndị siri ike ma na-enweghị isi (ekpere Katọlik)
“Saint Jude Thaddeus, onye ozi na onye nlekọta nke okwu siri ike ma sie ike,
Oriọna gị na-enwu ma na-enwu n'ebe ịchụàjà,
Ọnụnọ gị nke dị ebube,
Na-eru n'obi ndị kacha erughị ala ma nye ha udo nke uche,
Naghị agọnarị ndị na-efe gị amara ma ọ bụ arịrịọ,
Hatredkpọ-asị nsọ gị nụrụ mkpu akwa anyị.
Ana m ekpe ekpere maka ọnụnọ gị n'oge a,
Taa, enwere m obi nkoropụ na mwute,
M na-arịọ gị ka ị thisaa oku a,
Ọ bụ gị ka m nwere ike ịtụgharị,
Obi m na-ama jijiji ma ana m anụ ya ka ọ na-akụ
Ọchịchịrị na-ekpuchi mkpụrụ obi m,
Ihe mgbu m na-emekwa ka obi ghara iru m ala
Enweghị m ike ọzọ,
Gee m ntị biko.
Meere m ebere, meere m ebere
I so Jizọs jee n'ụzọ ụfụ,
I ji okwu ya kwusaa okwu ya, +
I kuziworo ìhè nke ume-adịghị ike,
I mere ka ha sie ike
Ma i nweghi obi abụọ ma atụrụ ọ bụla nọ n’ìgwè atụrụ gị,
Saved zọpụtara ndị na-ezighi ezi
Nke ije ije n'elu okwute,
Na nkume mmehie na ọchịchịrị kachasị njọ,
Idu ha n'ezi ụzọ,
Heavenlyzọ nke eluigwe na nke Chukwu.
Rịọrọ m Chineke,
Ka arịrịọ m bịakwute ya,
Site taa ka m na-ekwupụta na m ji obi gị niile fee,
Ebe ọ bụla m gara, m ga-agbasa ofufe gị.
M ga-ekwu okwu banyere ihu ọma i mere m taa,
Ime ka o doo onye ọ bụla anya,
Na okwukwe m nwere n'ebe ị nọ abụghị ihe mmechuihu,
M tụkwasịrị gị obi ma nwee olileanya n'ebe ị nọ
Ekpere a emeela ka amata ihe novena na Saint Jude Thaddeus ndị ji ofufe Chineke kpọrọ ihe, na-egosi okwukwe siri ike ha nwere na ya. N'otu ụzọ ahụ, e nwere ekpere dị iche iche nke San Juditas nke a rịọrọ ka Chineke tinye aka ya tupu Kraist, ụfọdụ n'ime ha bụ:
Ekpere maka oru. Otu n’ime ndị Kristian na ndị kwere ekwe ji eme ihe, nke onye ọ bụla na-ezube ime ka ezinụlọ ha kwụsie ike
Ekpere maka ịhụnanya na ọgwụgwọ. Ekpere ọzọ dị ike nke na-eje ozi dị ka ihe nduzi na ọnọdụ kachasị njọ na ndụ ma ọ bụ mgbe okwu mmetụta na-eweta isi ọwụwa
Vidiyo na ekpere nye Saint Jude Thaddeus maka ọrụ ebube agaghị ekwe omume:
Saint Jerome nke Stridon, Onye isi nke ndị ntụgharị
San Marcos Evangelista, Onye nchebe nke ndị ọka iwu, notaries na notaries